apple iphone 12 / pro 18w vs 20w vs 5w vs magsafe adapter yekuchaja aimhanya
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone 12 / Pro 18W vs 20W vs 5W vs MagSafe adapter yekuchaja kumhanya
Apple iPhone 12 / Pro 18W vs 20W vs 5W vs MagSafe adapter yekuchaja kumhanya
Kune ese e Apple & apos; s yakasarudzika-inokakavadzana nharo, chokwadi chenyaya ndechekuti iyo nyowani iPhone 12 nhevedzano haina chinhu mumabhokisi avo asi foni netambo. Tambo yeUSB-C ipapo, saka kana iwe usina & chembere yekuchaja zvidhinha, tambo uye maearphones akarara akakomberedza, kuenda kuchitoro iwe unoenda kunopedzisa Apple & apos; s seti, sezvo kambani iri pachena kuti yava kupfura kuva IKEA yemutengi yemagetsi nzvimbo.
Padivi rekuwedzera, Apple yakagadzirira 2020 iPhones ne nekukurumidza MagSafe isina waya kuchaja , uye ndokubudisira chaja nyowani 20W kwavari, kunze kwebhokisi, kuzvitoro zvayo. Kana iwe uchida kuziva kuti zvinotora nguva yakareba sei kuunza iyo iPhone 12 uye 12 Pro mabhatiri ku100% kubva kune yakaderera nyika nayo, kana neApple & apos; s nhaka 5W uye 18W majaja aungave uine mumba mako, pano & apos; s the scoop.
Yakanakisa iPhone inokurumidza charger muna 2020
Apple iPhone 12 Pro ongororo
- tenga kubva kuApple.com. $ 30 kubviswa kana iwe ukatenga mutakuri-wakavharirwa modhi.
$ 829Tenga kuApple
- Kubva BestBuy. AT & T, Verizon, uye Sprint / T-Mobile mhando.
$ 79999 Tenga paGoodBuy
- Chinja uwane iPhone 12 patiri. Nesarudzo yekutengeserana-mukati uye mapfumo asingagumi.
$ 79999 Tenga kuVerizon
$ 79999 Tenga kuAT&T
Apple iPhone 12 Pro 20W adapta yekuchaja kumhanya
Maminitsi 102 (1 awa nemaminitsi makumi mana nemaviri)
Iyo chete MagSafe adapta iyo ichaita kuti iburitse yayo yepamusoro 15W
Iyo itsva 20W charger iyo Apple yakaburitsa panguva imwe chete ne2020 iPhones haisi nyore bump kubva kune iPhone 11 Pro / Max 18W majaja ari mubhokisi. Ndiyo chaiyo inotakura neiyo nyowani iPad Mhepo 4 , saka unogona kushandisa izvo musingawirirane.
Ichowo kubheja kwako kwakanyanya kweiyo inokurumidza iPhone 12 / Pro kuchaja kana iwe usina & apos; usati watova ne18W chidhinha chekare, sezvo ichidhura zvishoma pane iyo iPhone 11 Pro / Max adapter iri mubhokisi.
Heano kuputsika kwenguva yekuchaja uchishandisa iyo iPad Air 4 & apos; s 20W Apple simba adapter:
mumaminetsi gumi nemashanu - 27%
mumaminitsi 30 - 55%
mumaminitsi 45 - 74%
mumaawa 1 - 85%
muawa imwe nemaminitsi makumi matatu - 95%
YEMAHARA 100% CHARGE - 1 awa uye 58 maminetsi
Apple iPhone 12 Pro 18W adapta yekuchaja kumhanya
106 maminetsi (1 awa uye 46 maminitsi)
Gore rakapera, Applepakupedzisiraakadonhedza zvidhinha 5W zvidhinha zveayo $ 999 uye kumusoro maPhones, ndokutumira iyo iPhone 11 Pro uye 11 Pro Max ine inokurumidza 18W charger mubhokisi. Ndiwo aive mazuva, se, mumweya wegore rino ratambudzika kusvetuka, iyo 2020 iPhones haina & apos; haina iyo mubhokisi .
Ivo zvakare havana iyo 5W imwe, kana chero chinhu, pane izvo nyaya, saka kana iwe uri kukwidziridza kubva ku iPhone 11 Pro / Max, iwe & apos; zvirinani chengeta yako charger. Tiri kutoona avalanche yechaja-shoma iPhone inopa paCraigslist uye eBay, asi isu tinodonhedza, pfungwa ndeye kushandisa yako nyowani iPhone 12 uye 12 Pro kubhadharisa neiyo 18W zvidhinha.
Kunyangwe Apple & apos; s ichiti iyo iPhone 12 & apos yekukurumidza kuchaja inongowirirana chete ne $ 19 20W adapter, yako oldie 18W simba ichachaja iyo iPhone 12 Pro kwenguva ingangoita iyo iyo 20W adapter.
Apple iPhone 12 Pro MagSafe padhi isina waya yekuchaja kumhanya
176 maminetsi (maawa maviri nemaminitsi makumi mashanu)
MagSafe uye 20W adapter bundle mutengo ichakugadzirisa kumashure angangoita makumi matanhatu madhora
Zvakare, kana iwe uchida yako nyowani magnetically-inosungirwa MagSafe isina waya charger kukwirisa yako iPhone 12 mamodheru pane yayo yepamusoro 15W simba iyo Apple inovimbisa, iyo inogona kungowanikwa chete neiyo nyowani 20W zvidhinha.
Kunyangwe Apple & apos; s 96W MacBook charger ichaona yakanakisa yekumhanyisa kumhanya neMagSafe, sezvo iyo puck & apos; s inokurumidza kuburitsa yakanyatsogadzirirwa kuti ibatanidzwe neiyo nyowani 20W adapta. Dzimwe nguva zvishoma zvinowanda, pano & maapos; s anoburitsa wattage yega yeApple & apos; s makuru majaja anoguma paakabatanidzwa neMagSafe:
Apple & apos; s 20W Simba Adapter - 15W
Apple & apos; s 18W Simba Adapter - 13W
Apple & apos; s 96W MacBook Pro Simba Adapter - 10W
Apple iPhone 12 Pro 5W adapta yekuchaja kumhanya
187 maminetsi (maawa matatu nemaminitsi manomwe, 32% muawa)
Inotevera mune yedu runyorwa rwe iPhone yekuchaja zvichemo mamiriro kana iwe uchikwidziridza kubva kune iyo iPhone 11, kana iyo pamberi payo. Ipapo ungadai uine Apple & apos; yechinyakare inononoka 5W charger pauri, uye, titende isu, iwe zvirinani kutengesa iyo imwe pamwe nefoni yawakagadziridza kubva, sezvo zvichitora zvachose kubhadharisa iyo nyowani iPhone 12, kunyangwe ine bhatiri diki pane iyo iPhone 11 Pro, uye kunyangwe iyo iPhone 11.
Kubhadharisa iyo iPhone 12 Pro neApple & apos; s epamusoro 61W kana 96W adapter yekumhanyisa
Takachengeta zvakanakisa zvekupedzisira, seApple & apos; s shopu yekona inotengesawo ine simba 61W USB-C kana 96W zvidhinha zve ... ayo MacBooks, kunyangwe hazvo vagadziri veApple vava kutumira 65W charger nefoni dzavo.
Hei, isu takavhara rekodhi maminetsi makumi matatu nemaviri zvakatora kubhadhara zvakakwana OnePlus 8T & apos; s hombe 4500mAh bhatiri neakadaro adapta, Apple & apos; s 61W zvidhinha zvaizoita mashiripiti akafanana kana iwe ukakwenya $ 69 yacho?
Zvirokwazvo kwete, sezvo bhatiri riri muOnePlus 8T rakakamurwa muzvikamu zviviri zvinobhadharisa panguva imwe chete, uyezve foni-tambo-charger symbiosis inopfuura yakachena nhamba yezvitina, sezvo ichifanirwa kuwiriraniswa uye kunyatso chengetedzwa nematunhu iyo rese yekuchaja nzira, kubva kuburitsa, kune bhatiri kemisitiri.
Kungofanana neadapter 61W yaisazoda kuita MagSafe puck kuburitsa yayo yepamusoro mvura iri nani pane yepamutemo 20W pairing, zvakare yakakunda & apos; t kuchaja yako iPhone 12 nekukurumidza kupfuura Apple & apos; s new 20W adapter.
pa & t 5g kugadzirisa
samsung noti 9 nhema chishanu 2018
Aya makadhi eAT & T micro-SIM akaitirwa LTE iPhone 5?
Samsung mafoni, nhau uye ongororo
Samsung Galaxy Cherekedza shanduko: Heino & maapuro maitiro zvachinja pamusoro pemakore
Samsung Galaxy Watch 4 kuburitsa zuva, mutengo, maficha uye nhau
Mashandisiro eBrew Kuisa Java paMac
Yakanaka kwazvo chibvumirano chitsva chinobvisa Samsung Galaxy S20 FE 5G mutengo kusvika kungoita madhora mazana mana
Maitiro ekutarisa saizi yemufananidzo, resolution, uye zvimwe pane yako iPhone kana iPad